मृत्यु हुनुअघि फेसवुकमा पूर्वसांसद तथा पूर्व राजदुत लामाले श्रीमतीलाई लेखे यस्तो मार्मीक पत्र, ‘म म’रे पनि तिमी र मेरो भाई इमानले किरिया नगर्नु ‘ – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/मृत्यु हुनुअघि फेसवुकमा पूर्वसांसद तथा पूर्व राजदुत लामाले श्रीमतीलाई लेखे यस्तो मार्मीक पत्र, ‘म म’रे पनि तिमी र मेरो भाई इमानले किरिया नगर्नु ‘
काठमाडौ । पूर्वसांसद तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको गएराति निधन भएको छ । कोरोना संक्रमित लामाको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । २०४८ र २०६४ सालमा सांसद बनेका लामा कम्युनिष्ट नेताहरुमध्येमा दिग्गज मानिन्थे । पारिवारिक रुपमा समेत समस्या झेल्दै आएका लामाले आफ्नो फेसबुक पेजमा अन्तिम स्टाटस गत डिसेम्वर ३ मा पोष्ट गरेका छन् ।
निकै भावुक बनेर लेखेको उक्त लामो स्टाटसमा आफुलाई सबैभन्दा मनपर्ने आमा शब्द लेखेका छन् । आमापछिको दोस्रो माया श्रीमतीलाई गर्ने गरेपनि श्रीमतिसँगको माया ‘बर्मुडा ट्रयाङ्गल’मा फसेको उनले जनाएका छन् । उनले मृत्यु अघि लेखेको कुरा जस्ताको त्यस्तै
‘प्रिय मैले तिमीलाई त्यही आमा पछिको दोश्रो माया गरेको थिएँ तर त्यो आज याम्बालिङ्ग रुपी बर्मुडा ट्रयाङ्गलमा फसेको छ । यसलाई सामान्य लोग्नी स्वस्नीको झगडाको रूपमा लिँदै आफ्नो स्वास्नी आफैले हात लिन सक्नुपर्छ भन्छन्, छ्या कति कुरुप सिलावरको देक्ची कुचिएका कुरुप विचार र अनुहार बोकेका तिम्रा जिग्री दोस्तहरु,,,,,,,,,,,,’ लामाले आफ्नो अन्तिम स्टाटसमा भनेका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अस्पतालको बेडमा सु ते को फोटोसहित राखिएको उक्त स्टाटसमा ‘यो अन्तिम घडिमा पनि मेरो धन मेरो लागी काम लाग्दैन भने त्यो धनको के काम ? आफ्नो पाउनु पर्ने त यो हालतमा दिँदैन भने मेरो निम्ति कहिलेलाई चाहियो ?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
उनले जीवन म’र’ण’को ल’डा ईको बेलासमेत साथमा नहुने श्रीमतीलाई श्रीमती भनिरहनु औचित्य नहुने भन्दै ‘लौ प्रिय गरि खान मनग्य गरि दिएको छु,,,,,,,,,,,बाँकी जीवन मोजगर,,,,,,,,,, मैले पुरा गर्न नसकेको अधुरा काम अरुसँगै पुरा गर,’ भावुक भएर लामाले आफ्नो पी’डा पोखेका छन् ।
उनले आफु अन्यायमा परेको कुरामा कतैबाट न्याय नपाएपछि फेससबुक स्टाटस लेखेको पनि जानकारी गराएका छन् । ‘अनेक प्रयास र कुनै माध्यमले काम नगरेपछि बडो शरमका साथ यो मिडिया अपनाएँ माफ गर प्रिय,,,,,,,,,,,,यदि म कथंम कथाजित मरेछु भने मेरो काजक्रियामा तिमी र मेरो भाइ इमान सामेल नहुनु,,,,,,,,,,,। यो मेरो बिन्ती,,,,,,,,,,,,।’ फेसबुक स्टाटसको अन्तिममा लेखेका छन् ।
बुधवारको वर्षा र हिमपातले आज विहिवार कस्तो रहला मौसम ? यस्तो महाशाखाको बुलेटिन
गोरखामा संक्रमितको उपचार गर्दैनन् निजी अस्पताल
टिपरको ठ’क्करबाट द’म्पतीको निधन, ना’बालक छोरा टु’हुरा